बिबाह गरेर ६ दिन सगै बिताएर विदेश गएका श्रीमान ७ वर्ष घर नफर्के पछि… – ebaglung.com
बिबाह गरेर ६ दिन सगै बिताएर विदेश गएका श्रीमान ७ वर्ष घर नफर्के पछि…
२०७५ बैशाख १२, बुधबार १६:०५	Top News, अन्य समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ वैशाख १२ । अहिले उनि ३५ नाघेर पनि उनि अहिले बीसबाईसे तरुनी झैं मस्त जवान छिन् । उनि १७ वर्षकी छँदा बिवाह भएको र आफैले बैबाहिक सम्वन्ध धिक्कारेर छाडेको बताउँछिन् ।
रगत वग्ला जस्तो लाली चढेको चेहरामा रहेकी उनलाई नपछ्याउने कुनै पुरुष छैन । त्यस्तो कलकलाउँदो उमेरमा बिबाह गरेको श्रीमान ६ दिन सम्म सगै बसेर विदेश गएको सात वर्ष सम्म घर नआए पछि आफुले सत्धर्मको क्रम भंग गरेको खुुलेरै बताउँछिन् ।
उनले नाम नवताउने सर्तमा प्रदेशी श्रीमान र घरदेशी श्रीमतिको प्रतिनिधी मुलक पीडा व्यक्त गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्ना सवै कुराहरु यसरी खोलिन –‘ बिबाह गरेका श्रीमान एक हप्ता जति बसेर हिडेका हुन विदेश , त्यस पछि फर्केर आएनन् ।’
अहिले त उनि घर आएकी उतै छन त्यसको वास्ता समेत मलाई छैन् । अहिले म स्वतन्त्र चरी हुँ, मै हुँ भन्नेहरुको समेत हट्केक मोरी हुँ । त्यस्तो अवस्थामा बिबाह भएको मेरो उसैले चढाएको मात शान्त हुन कसरी सक्थ्यो र ? के मेरा चाहनाहरु कतिञ्जेल सत्धर्मका नाममा ? वञ्चित भई रहन सक्थे र ? ’
हुन पनि उच्च शिक्षा हाँसिल गरेकी उनलाई नपछ््याउने सानो तिनो मात्र होईन ठुला बडाहरु नै मरिहत्य गर्छन् । उनले भनिन्–‘ म कसम खाएर भन्छु मेरो फक्रेको बैंस मैले बिबाह पश्चात उनैलाई पहिलो पटक सुम्पेकी हुँ । ’
एक हप्ताको दौरानमा उनैले मलाई पागल बनाए । स्कुले जीवनमा मातेका केटाहरुले कता काता चलाएर जिज्ञाषु बनाउन मरेका थिए । हर कोशिस गर्दा पनि मैले मेरो अस्मीता डग्मगाउन दिएकी थिईन् ।
उनि विदेश हिडेको तिन वर्ष सम्म पनि मैले उनको सत् डगाउन चाहिन । बिबाहको तेस्रो वर्ष म सदरमुकाम जाँदै थिएँ । अगाडीको सिटमा अटिनअटाउँ डाईभरको सिटमा थिएँ । विस्तारै विस्तारै डाईभरका कुईनोको धक्काले मेरो शरीरमा हलचल मच्चाई दियो ।
मेरो शरीर काँप्यो , खलखली असिना पसिना भएँ । म मेरो श्रीमान पछि दोश्रो पटक पागल भएकी थिएँ । ओर्लिने वेला अघि ती ड्राईभरले मागेको फोन नम्वर मैले अस्वीकार गर्न सकिन र दिएँ ।
म ओर्लेलेको त्यस्तै आधा घण्टा पछि तिनै डाईभरको फोन आयो । त्यस फोनमा मैले मेरो श्रीमानको चेहरा देखें । उनले दिएको लोकेशनमा पुगे । होटलको कोठा बुक गरेका रहेछन् । बियरको चुस्कीे पनि मेरो जीवनमा त्यो पहिलो थियो ।
बियरको चुस्की संगै बैसले सतायो, उतिखेरै म-यो को-याले पनि विताएरै छाड्यो । क्रमशः उसको र मेरो लामो समय सम्म सम्वन्ध टिकी नै रह्यो ।
बिस्तारै मन फराकिलो र दह्रो हुँदै गयो, अहिले म घर न सर वुटवल काठमाडौं हुँदै सिमाना नजिकै भारतको एक कोठीमा राम्रै पैसा कमाउन सफल भएकी छु । घर छ , गाडी छ, अझ भनौ म संग ऐसआराम सवै थोक छ ।
नाक खुम्चाउँदै उनले थपनि–‘ भाँड्मा गए फगत पति–पर्मेश्वर…, मनको ईच्छा आंकांक्षा गुमाई गुमाई वाउ आमाको ईज्जत..? उनले सुझाव दिईन वैदेशिक रोजगारको नाममा कसैले कसैको ईच्छा आकांक्षा माथी खेलवाड नगरुन् ।
विदेश जानेहरुले धेरै अवधी नलम्वाउन् । अन्यथा म जस्तै कतिपय महिलाहरु यसरी नै यौन व्यवसायी समेत बन्न बाध्य हुने छन् । मलाई यहाँ सम्म ल्याएको त्यही निर्दयी श्रीमान भनाउँदाको बैदेशिक रोजगार नै हो ।
आफ्नै दाजुव्दारा वालात्कृत बहिनी आपतमा !